“Waxa Laga Rabay Iyaga (Xukuumada Kulmiye) Inuu Faankoodu Ku Koobnaado Wixii Ay Qabteen, Laakiin Balanqaadka Ay U Daayaan Xisbiyada Mucaaridka” Musharax Cabdiraxmaan Cirro | Somaliland Today
← Komishanka Doorashooyinka Oo Ka Hor Istaagay Baashe Maxamed Faarax Inuu Khudbad Ka Jeediyo Daah-furka Qaadashada Kaadhka Codbixinta
DAAWO: 39-kii Xildhibaan Ee U Codeeyey Cabdiraxmaan Talyalne Oo Warbaahinta La Hadlay, Soona Bandhigay Xaqiiqo Fariin U Ah Maxkamada Sare. →
“Waxa Laga Rabay Iyaga (Xukuumada Kulmiye) Inuu Faankoodu Ku Koobnaado Wixii Ay Qabteen, Laakiin Balanqaadka Ay U Daayaan Xisbiyada Mucaaridka” Musharax Cabdiraxmaan Cirro
Laascaanood (Somalilandtoday) – Musharaxa xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro) ayaa sheegay in xukuumada Kulmiye laga rabo in faankoodu uu ku koobnaado wixii ay qabteen hadiiba uu jiro wax qabad, wixii balanqaad ahna ay u daayaan xisbiyada Mucaaridka ah.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro), Musharaxa Madaxweyne ee xisbiga Waddani ayaa u balanqaaday noocyada kala duwan ee ciidamada qaranka Somaliland Mushahar kordhin dhan 250% marka ay hogaanka dalka ku guulaystaan hadii alle idmo, isla markaana ay Askari kasta u dhisi doonaan hoy ama guri.
Musharaxa Xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, waxa uu sidaasi ka sheegay khudbad uu ka jeediyey munaasibad lagu daahfurayey qaadashada kaadhka codbixinta ee gobolada Sool iyo Sanaag, waxaanu intaa ku daray in mashruuca ugu horeeya ee xisbiga Waddani uu qaban doonaa uu yahay Biyo macaan oo ay usoo saaraan magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool.
Musharaxa Madaxweyne ee xisbiga Waddani oo arimahaasi ka hadlayaana waxa uu hadalkiisa ku bilaabay oo uu yidhi “Munaasibadan aynu iskugu nimid maanta oo lagu daahfurayo bilawga qaadashada kaadhadhka codbixinta ee gobolka Sool iyo Sanaag.
Fariintayda koowaad waxa weeyi dhamaan shacbiga reer Somaliland ee ku nool Sool iyo Sanaag ee is-diiwaangaliyey inay maanta furasadaa aanay dayacin oo ay qaataan kaadhadhka codbixinta, kuwaas oo siinaya fursada ah inay codeeyaan oo cida ay rabaan iyagu markaa ay ku doortaan, waxaan ku adkaynayaa dhamaan shacbiga in aanay fursadaasi iska dayacin si aanay u waayin xuquuqdooda ah inay codeeyaan.
Ta labaad xisbiga Kulmiye ee talada haya inay iska faanaan waanu u ogolahay waayo xukunkay hayaan, Mashaariicdaa ay sheegeen ee ay ka mid yihiin Dugsigaa boodhinka ah, Dhakhtarka iyo Wadooyinka, intooda badan waxa lagu dhisay kaalmada aynu ka helno dibada laakiin waa inay u sheegaan kaalmada horumarineed waxaanu ka helnay kaalmo Somaliland la siiyey. Inay iskaga faanaan waanu u ogolnahay, waxaana laga rabay iyaga (Xukuumada Kulmiye) inuu faankoodu ku koobnaado wixii ay qabteen, laakiin balanqaadka ay u daayaan xisbiyada mucaaridka ah.
Barnaamijka xisbiga Waddani uu doonayo inuu ku galo doorashada, shacbiga wuu usoo bandhigay, waxba faahfaahin maayo hada oo waxaanu leenahay barnaamijkayaga nagu doorta aanu idiin soo bandhignay.
Balanqaadka xisbiga Waddani waxaan ku soo koobayaa afar qodob, Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waanu ka xunahay in aanay ilaa maanta Biyo macaan helin, waxaanu u balanqaadaynaa shacabka degen gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood in mashruuca ugu horeeya ee aanu samaynaynaa uu noqdo in Laascaanood hesho biyo macaan.
Balanqaadka labaad waxaanu u balanqaadaynaa ciidamada Somaliland anagoon kala soocaynin in mushaharada u kordhino 250%.
Waxaanu balanqaadaynaa, Aabahay ayaa askari ahaan jirayoo askartu guryaha ay ku noolaan jireen waan soo arkay inaan hoy u samayno askari kasta oo ka tirsan ciidamada Somaliland.
Waxaanu inasha alaah ku dedaalaynaa in aanu maamul daadajinta fidino oo aynu gaadhsiino xuduudka Somaliland inaga oo iskaashanayna oo gacmaha is-haysana, dhamaan dadka deegaanka ku nool, ciidamadeenana aynu geyno xuduuda Somaliland oo aynu ka rarno magaalooyinka , hadii Illaahay ka dhigo.” Ayuu yidhi Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro).